मुख्य समाचार Archives -
दाङ, १२ फागुन । नेपाली काग्रेसका नेताहरुले लोकतान्त्रिक सविधान र अहिलेको व्यवस्थाको जग स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला भएको बताएका छन । गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउण्डेशन दाङले घोराहीमा आयोजना गरेको शान्ति प्रक्रिायामा गिरिजाप्रसाद … Read More
दाङ,१२ फागुन । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफुलाई दुष्मनले भुमरीमा पठाएको बताएका छन । काठमाडौ जिल्ला अदालतले सफाई दिएपछि पहिलो पटक दाङ आईपुगेका दाङ क्षेत्र नं. २ का सांसद कृष्णबहादुर … Read More
दाङ,१२ फागुन । काभ्रेको बनेपा भएको ११ औं राष्ट्रिय जुनियर आईटिएफ तेक्वान्दो प्रतियोगितामा दाङले एक स्वर्णसहित तीन पदक जितेको छ । फागुनको १० र ११ गते भएको प्रतियोगितामा प्रदेश नं. … Read More
दाङ, १० फागुन । दाङको बेलझुण्डीमा प्रदेश न ५ को एक्स्पो सुरु भएको छ । एक्स्पोको प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले उद्घाटन गरेका हुन । प्रदेश एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै … Read More
शिवराज खनाल देउखुरी,११ फागुन । नियम विपरित कर्मचारी सरुवा गर्न खोजेपछि लमही नगरपालिकामा विवाद बढेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीले नियम विपरित कर्मचारीको सरुवा र बर्खास्त गर्न … Read More
दाङ,१० फागुन । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले घोराही सहरको इतिहास झल्काउने उद्देश्यले घोराही सहरको दुई स्थानमा घोडाको प्रतिमा राखेको छ। घोराही बजारको मुख्य चोकहरु गुम्रा चोक र घोराही चोकमा घोडाको प्रतिमा … Read More
फोेटो पत्रकारिता बिधामाका कृयाशिल महिला पत्रकारहरुले पत्रकारिता क्षेत्रमाकाम गर्न गाह्रो रहेको वताएका छन् । क्यामेरा बोकेर घटनास्थलमा पुग्नै पर्ने बाध्यता फोटोपत्रकारहरुलाई भएका कारण अरु बिधाका पत्रकारको तुलनामा फोटो पत्रकारहरुले चुनौती … Read More
दाङ,८ फागुन । प्रदेश नं. ५ स्तरिय तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप प्रतियोगितामा दाङ आईटिएफ तेक्वान्दो संघ च्याम्पियन बनेको छ । नवलपरासीको बर्दाघाटमा विहिवार सम्पन्न भएको प्रतियोगितामा ५ स्वर्णसहित दाङ आईटिएफ तेक्वान्दो संघ … Read More
काठमाडौं, ८ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नैतिकताका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा कमिसन मागेको आरोप लागेका बाँस्कोटाले … Read More
दाङ ६ फागुन । जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गरेर ७० औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइने भएको छ । फागुन ६ देखि ८ गतेसम्म दिपावली गर्ने र ७ गते विहान घोराहीमा प्रभातफेरि गरिने … Read More
काठमाडौं, ५ फागुन । संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीलाई जवरजस्ती करणी गरेको अभियोग लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले सफाइ पाएका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले सोमबार फैसला गर्दै महरालाई सफाइ दिएको काठमाडौं … Read More
दाङ,४ फागुन । निजी विद्यालयहरुले बालबालिकालाई सस्कारसहितको गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न जोड दिनुुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ बसन्तापुरमा रहेको हाइलाइट इंग्लिस बोर्डिङ … Read More
दाङ,३ फागुन । सिमा अतिक्रमण र एमसिसि सम्झौताको बिरोधमा साना पाँच राजनीतिक दलहरुले शनिवार घोराहीमा प्रदर्शन गरेका छन । राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताको रक्षासँगै भारतद्धारा अतिक्रमित भुमि फिर्ताको माग गर्दै … Read More
घोराही, ३ फागुन । दाङको घोराहीमा हिजोदेखि सुरु भएको प्रथम सहिद लखन थापा मगर रनिङ शिल्डको दोस्रो दिन दुई खेल भएका छन् । दोस्रो दिनको पहिलो खेलमा तुलसीपुरको सक्सेसले घोराहीको … Read More
दाङ,३ फागुन । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ बसन्तापुरमा रहेको हाईलाईट इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलले बार्षिक उत्सवका अवसर ज्येष्ठ नागरिकलाई झुल र फलफुल वितरण गरेको छ । विद्यालयले २१ औं बार्षिक … Read More
घोराही,२ फागुन । दाङको घोराहीमा महिला उद्यमीहरुले गार्मेन्ट सञ्चालनमा ल्याएका छन । करिव ३५–४० लाखको लगानीमा नमुना सिलाई तथा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन । प्युठान जिल्ला निवासी तीन जनाले … Read More
दाङ, २ फागुन । जिल्लाको सर्वाधिक राशीको फुटवल प्रतियोगिता प्रथम सहिद लखन थापा मगर रनिङ शिल्ड फुटबल प्रतियोगीता–२०७६ शुक्रवारदेखि सुरु भएको छ । १४३ औँ लखन थापा मगर स्मृति दिवसका … Read More
लक्ष्मण बस्नेत तुलसीपुर,२ फागुन । सप्तरङ्गी बोर्डिङ स्कुल (सक्सेस) तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ बेलुवा दाङले आफ्नो साताब्यापी खेलकुद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बिद्यालयमा अध्ययनरत छात्र र छात्राभित्र लुकेर … Read More
लमहीमा मृगौला रोगीहरुका लागि हेमोडायलासिस सेन्टरको स्थापना भएको छ । सम्भवतः दाङ जिल्लाकै सबैभन्दा धेरै मेसिन भएको यो सेन्टर स्थापनाका लागि भर्खरै खुलेको रोटरी क्लव अफ लमहीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको … Read More
घोराही, १ फागुन । जिल्लाकै पुरानो विद्यालयका रुपमा रहेको पद्मोदय पव्लीक नमूना माध्यामिक विद्यालय भरतपुरमा अटो मोबाइल्स अध्ययनरत बिद्यार्थीले ताला लगाएका छन । सिटीईभिटी अन्तर्गत डिप्लोमान इन अटोमोवाइल इन्जिनियरिङमा अध्ययनरत … Read More